Umbono omtsha woKhenketho eHawaii kukuzibulala kwezoQoqosho, kodwa hayi umbono "wokuthetha kakubi"
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Umbono omtsha wezoKhenketho eHawaii kukuzibulala kwezoQoqosho, kodwa hayi umbono ukuze "intetho inuke"
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • lomhleli • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ulibale ingxaki ye-COVID-19, rekhoda i-COVID yokusweleka kunye neenkcukacha manani eHawaii. Libala ukufika kwabakhenkethi okuthe kwenyuka kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwaye kubuye emadolweni ngoku.
Ingxoxo ebaluleke kakhulu kwiGunya lezoKhenketho eHawaii yindlela yokuphelisa ukuhamba kunye nephupha lendlela yokuphila yaseHawaii engazinzanga amashumi eminyaka. Ngaba kukho umnqweno wokufa kukhenketho kwi Aloha Urhulumente?
Ngelixa iiBhodi zezoKhenketho kwimimandla emininzi e-United States nakwihlabathi zinqwenela ukufumana indlela yokwamkela iindwendwe ezininzi, ukugcina ishishini, iGunya lezoKhenketho eHawaii libonakala licinga ngeendlela zokulidimaza eli candelo.
Isenokungabonakali njenge Igunya lezoKhenketho eHawaii iIarhente kaRhulumente exhaswa ngemali ngabarhafi baseHawaii kwaye abaphetheyo kwezempilo kunye nokukhuthaza ishishini lokuhamba nezokhenketho eHawaii.
Ezokhenketho lelona shishini likhulu eHawaii. Uninzi lwabantu abayi-1.6 yezigidi abahlala kwi-50 ye-US State baxhomekeke ngqo okanye ngokungathanga ngqo kumzi mveliso weendwendwe.
Ukusukela nge-9 kaSeptemba 2020, lonke unxibelelwano lume kwi-HTA. NgoSeptemba 9 yayilusuku Umnumzana John de Fries waba yi-CEO yeGunya lezoKhenketho eHawaii.
Ukusukela nge-9 kaSeptemba 2020, kwakungekho sikhokelo, kungekho ngxelo zichaphazelekayo malunga ne-COVID kunye nokhenketho. Izigidi kwimali yabarhafi, i-HTA ayiphumelelanga ukuthatha ubunini beengxaki egameni likaRhulumente waseHawaii nabantu bayo.
Iifowuni ze-HTA bezikhala oko ukusukela nge-Matshi 2020, kungekho mntu unokuthetha naye. Olu papasho aluzange lukwazi ukuthetha noMnu de Fries.
Umnumzana de Fries akakaze aye kumsitho weendaba, wenza naziphi na iingxelo ezinokuthi zincede kwaye zikhuthaze iindwendwe, ngaphandle kokukhupha amanani kunye nokwenza izibhengezo zokutyhafisa iindwendwe.
I-HTA yajika yaya kule arhente yomgama apho abantu baphupha malunga nenkcubeko yaseHawaii, umhlaba womama, kunye nokulwa ukhenketho ngaphezulu ngamanye amaxesha kungekho kukhenketho.
Ukuxoxa ngemicimbi yendalo esingqongileyo, ukhenketho olugqithisileyo, indawo yaseHawaii, kunye nokhenketho lwenkcubeko zizinto ezibaluleke kakhulu kumaxesha aqhelekileyo. Mhlawumbi i-HTA isenokungaqapheli. Sityhutyha elona xesha likaxakeka kwezorhwebo nezokhenketho ezakhe zajongana nazo.
eTurboNews yafikelela kubachaphazelekayo eHawaii, kubandakanya amaqela ehotele, iivenkile zokutyela, iivenkile. Amagqabantshintshi, ukuba kukho naziphi ezingekhoyo kwirekhodi. Akukho mntu wayefuna ukuthetha into. Sukuthetha ukunuka!
UMufi Hannemann okwangoku ngu Pumhlali kunye neCEO ye Umbutho wokuHlala kunye nezoKhenketho eHawaii. Usebenze njengosodolophu we-12th weSixeko kunye neNqila yase-Honolulu, umasipala weshumi elinesithathu ngobukhulu e-United States. Umnumzana Hannemann akazange abuyise naziphi na iifowuni, ii-imeyile okanye imiyalezo yemidiya yoluntu ukusukela oko kwaqala i-COVID-13
Le yindlela yaseHawaii!
IGunya lezoKhenketho eHawaii lixakekile kwaye lenze impumelelo enkulu kwi Muphawu Kuu intetho yasekhaya.
Nantsi into ayithethayo uMnu. De Fries malunga neMalam Kuu:
Ukuguqulelwa, "ukukhathalela ikhaya lam endilithandayo" sisiqinisekiso se-visceral kum; Ngelixa livuma amandla endalo okuba abantu bazive bendele kwaye benoxanduva lwendawo abasuka kuyo okanye indawo abahlala kuyo kwaye babize ikhaya.
Beset ngoku kukuwa kwendyikitya yokufa kunye noqoqosho, iHawai'i ijongene nenqwaba yemiceli mngeni eyoyikisayo- phakathi kwayo, ukuvulwa kweshishini lethu lezokhenketho, ngexesha apho ukuxhalaba okukhulu nokukhulayo kunokuvakala kuluntu lwethu lwasekhaya nakuRhulumente wethu wonke.
Ukuqaqamba kwethemba, nangona kunjalo, kufumaneka ekomeleleni nasekuyileni iinkokeli zaseHawaii kumacandelo karhulumente nawabucala; kwaye ndiyabahlonipha ngentlonipho oomakazi, oomalume, abazali, ikūpuna, ulutsha, abaqeqeshi, ootitshala, abaphathiswa, njlnjl. amashishini amancinci, iingeniso kunye neenkampani. Ngokusisiseko, ezi zenzo zizimeleyo ezenzeka mihla le ukusuka ePolihale, eKaua'i ukuya eKumukahi Point kwisiqithi saseHawaii zonke ziqulethe umoya kunye nomongo weMālama Ku'u Home - kuba nokuba zithini na iimeko zethu ngokobuhlanga, umgaqo osisiseko “wokukhathalela ikhaya lam endilithandayo” ubethelelwe kubuntu bethu kunye nakwiDNA ehlangeneyo.
Indlela kaHawai'i yokubuyisela uqoqosho kunye nentlalo-ntle ephuculweyo iya kufuna amanqanaba angazange abonwe ngaphambili, ukusebenzisana, ukusebenzisana, kunye nobunkokeli obumanyeneyo kuwo onke amacandelo.
Ngelishwa, le ngxoxo ibalulekileyo, izifundo ezimelwe kakuhle, iividiyo ezimfutshane, kunye neenkcazo-ntetho aziyi kusombulula ingxaki ye-COVID-19 kurhulumente. Impilo-ntle yabahlali, kubandakanya uninzi lwabantu abangenamakhaya, amatyala ezentlalontle, kunye nabanye baxhomekeke kwimali eveliswe lushishino lokhenketho nokhenketho.
Igunya lezoKhenketho eHawaii libhengeza ukuqala kwakhona kukaKukulu Ola kunye Aloha IiNkqubo zeAina 15 Septemba 2021
IGunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) libhengeze ukuba iphinda iqale kwakhona i-Kukulu Ola kunye Aloha Iinkqubo ze-Aina kunye nokufuna izindululo kuluntu. I-HTA ikhuphe izicelo ezimbini zeZindululo (RFPs) zokubonelela ngenkxaso mali kwimibutho engenzi nzuzo kunye neenkqubo eziza kuqhubela phambili inkcubeko yaseHawaii kunye nokugcina izibonelelo zendalo ngo-2022.
I-HTA ipapasha isiCwangciso soLawulo lwezoKhenketho esiSekwe eLuntwini e-Oahu, nge-31 Agasti 2021
Igunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) lipapashe isiCwangciso soMsebenzi soLawulo lweNdawo esiyi-Oahu ngo-2021-2024 (i-DMAP), isikhokelo sokwakha ngokutsha, ukucacisa ngokutsha nokuseta umkhombandlela wokhenketho e-Oahu. Isicwangciso esisekwe eluntwini siyinxalenye yomsebenzi we-HTA ngokubhekisele kwikhaya laseMalama Kuu (ukukhathalela ikhaya lam endilithandayo) kunye neenzame ezikhawulezileyo zokulawula ukhenketho ngendlela yokuzihlaziya.
IRhuluneli yaseHawaii uDavid Ige Ubongoza abahlali, abatyeleli ukuba banciphise iihambo ezingabalulekanga
Ugqirha David Ige namhlanje ucele abahlali baseHawaii kunye nabakhenkethi ukuba balibazise lonke uhambo olungadingekiyo ukuphela kuka-Okthobha u-2021 ngenxa yokunyuka, okukhawulezileyo kwamatyala e-COVID-19 ngoku anika uxinzelelo kwizibonelelo zikarhulumente kunye nezixhobo.
IGunya lezoKhenketho laseHawaii (i-HTA) libhengeze namhlanje ipivot yayo yokuba ngumbutho olawula indawo ekuyiwa kuyo kunye nokunyuselwa kwabaphathi ababini abaphambili abaza kunceda ukukhokela amanyathelo achazwe kwi-HTA yesiCwangciso seQhinga se-2020-2025.
Igunya lezoKhenketho eHawaii libhengeza ukuLungelelaniswa kwakhona kuLawulo lokuFikela apho kubandakanywa ukuKhuthazwa okuLawulayo okuBini ngoJulayi 26, 2021
I-HTA icwangcise ngokubanzi ulwakhiwo kunye nokusebenza kwayo ukuxhasa injongo ye Malama Kuu Ikhaya (ukukhathalela ikhaya lam endilithandayo) ngemigaqo yokhenketho oluhlaziya. I-HTA izinikele ekuxhobiseni uluntu ukuba lube nelizwi elikhulu kwikamva lezokhenketho, kugxininiswa ekubuyiseni okusingqongileyo, ukuqhubela phambili inkcubeko yaseHawaii, ukuqonda iinkcubeko ezahlukeneyo zaseHawaii, kunye nokuxhasa iziphumo zoqoqosho ezinoxanduva.
IHawaii yoKhenketho iXhasa iNkqubo yokuNciphisa ifuthe labaTyeleli kwiPololu Valley kwiSiqithi saseHawaii, ngoJulayi 9, 2021
IPololu Valley yindawo enobungangamsha nembali eMantla eKohala kwiSiqithi saseHawaii. Kutshanje, kuye kwakho ukwanda okukhawulezayo kwabatyeleli kwiPololu Lookout, eTreyini, naselunxwemeni lonxweme, kwaye kukho imfuno ekhulayo yokunciphisa iimpembelelo kuluntu nakwimithombo yobutyebi yendalo nenkcubeko.
Igunya lezoKhenketho eHawaii lisebenzela ukunciphisa ifuthe labatyeleli kwindlela eya eHana, nge-8 kaJulayi ka-2021
- Indlela ebukekayo eya eHana, eyaziwa ngokusemthethweni njengeHana Highway, yenye yeendawo eziphambili ezinomdla kubatyeleli baseMaui, nezikhokelele kwingxinano yezithuthi ebangelwe yinxalenye yokupaka ngokungekho mthethweni kunye nokuwela ngendlela engakhuselekanga yabahambi ngeenyawo kuhola wendlela. Ukunceda ukunciphisa imeko kubahlali baseHana, iGunya lezoKhenketho laseHawaii (i-HTA) liyaqhubeka nokusebenza namagosa aseMaui County kunye nezinye iiarhente zikarhulumente, kwaye ikwacebisa ngamandla abatyeleli ukuba bajoyine ukhenketho oluvela kwinkampani evumelekileyo yokhenketho endaweni yokuqhuba ngokwabo okanye Ukutyelela ezinye iindawo kwiMaui.
IGunya lezoKhenketho laseHawaii lixhasa uMsitho woSasazo lweMerrie Monarch kunye noPop-Up Makeke, ngoJulayi 1, 2021
- IGunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) liyazingca ngokuxhasa usasazo lwe 58th UMnyhadala woNyaka weMerrie Monarch kunye nexesha lesi-3 le- Pop-Up Makeke eziza kubakho ngexesha lomthendeleko. Ngu 11 loth unyaka i-HTA ibingumxhasi weMerrie Monarch Festival. Inkcubeko yaseHawaii yenye yeentsika ezine ze-HTA kuyo Isicwangciso esiliqili sika-2020- 2025, ekwaguqulelwa kwi- Olelo eHawaii.
Iziphumo zeHTA zikhutshwa kuvavanyo lwe-2021 Resident Sentiment, ngoJuni 24,201
Igunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) likhuphe iziphumo zoPhando lwayo lwentwasahlobo lowama-2021 ngexesha leNtlanganiso yeBhodi yabaLawuli kaJuni namhlanje. Olu phando luye lwafumanisa ukuba ngelixa uninzi lwabantu luxhalabile kukukhula kweshishini leendwendwe, uninzi lwabahlali baseHawaii bakholelwa ukuba ukhenketho luyifanele imiba enxulumene nomzi mveliso.
Igunya lezoKhenketho laseHawaii lisungula iphulo leMfundo leMalama eHawaii, ngoJuni 1, 2021
IHawaii imema abahambi ukuba beze kwiiIihawaiian Islands kwinqanaba elinzulu kugxininiso olukhulu ekunxibelelaneni nenkcubeko yethu, ukubuyisela kwindawo esiya kuyo kunye nokuyigcina ikamva, ngelixa silandela iindlela ezikhuselekileyo zempilo. Lowo ngumyalezo emva kothotho lweevidiyo ezichukumisayo nezifundisayo ezidlalwa kwiindwendwe ngaphambi nasemva kokuba befike eHawaii. Inxalenye yephulo lokuthengisa iMalama eHawaii, ebisandula ukwenziwa ngentsebenziswano phakathi kweGunya lezoKhenketho laseHawaii (HTA) kunye nabakhenkethi baseHawaii kunye neZiko leeNkomfa (HVCB).
IBhodi yoLawulo loKhenketho eHawaii ikhetha uGeorge Kam ukuba asebenze njengoSihlalo, ngo-Epreli 30,2021
IBhodi yaBaphathi bezoKhenketho eHawaii (HTA) ikhethe uGeorge Kam njengesihlalo sayo esitsha izolo intlanganiso yebhodi yenyanga. Usebenze ngaphambili njengesekela-sihlalo. U-Kam uyinkokheli yoluntu esebenzayo kwaye ungumphathi wangaphambili kwishishini le-surf.
“Sikwixesha 'le-huliau' okanye utshintsho olwenziwayo. Eli lixesha lethu lokufumana izisombululo kumhambi ojonga ngokulinganisela amathuba okhenketho kunye nemiceli mngeni ewubonisayo kuluntu lwethu. Ukhenketho lunokuba sisixhobo sokuphucula umgangatho wobomi kubo bonke abantu baseHawaii. Ukufumana ibhalansi yincakuba, ububanzi bencakuba yengca yesibini, ”utshilo uKam. "Ndijonge ukusebenza noluntu, iinkokheli zethu ezikhethiweyo, iqela le-HTA kunye nebhodi ye-HTA ukufumana ulungelelwaniso."
I-HTA iphendula kuhlobo lwamva nje lwe-HB862, ngo-Epreli 9, 2021
UJohn De Fries, umongameli kunye ne-CEO yeGunya lezoKhenketho eHawaii (HTA), ukhuphe le ngxelo ilandelayo ephendula kwiiKomiti zeSenate zaseHawaii kwiindlela kunye neendlela kunye noRhwebo kunye nokuKhuselwa kwabathengi ngokusebenzisa ithumbu lomzuzu wokugqibela kwaye bathathe indawo yokuhambisa umthetho Itshintsha kakhulu indlela iarhente yezokhenketho yaseHawaii iza kumela ngayo urhulumente kunye neenzame zakhe zokusebenzisana noluntu kunye nokuseta kwakhona ukhenketho ngendlela yokuzihlaziya.
I-HTA ipapasha iSicwangciso soLawulo lwezoKhenketho esiSekwe eLuntwini kwiSiqithi saseHawaii, ngo-Epreli 1, 2021
IGunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) lipapashe iphepha le- 2021-2023 IsiCwangciso sokuSebenza soLawulo lweNdawo yokuFikela eHawaii (DMAP). Inxalenye yombono weqhinga le-HTA kunye neenzame eziqhubayo zokulawula ukhenketho ngendlela enoxanduva nehlaziyayo. Yaphuhliswa ngabahlali besiqithi saseHawaii, kunye nentsebenziswano ne-County of Hawaii kunye ne-Island of Hawaii Visitors Bureau (IHVB). I-DMAP isebenza njengesikhokelo sokwakha ngokutsha, ukucacisa kwakhona nokuseta kwakhona umkhombandlela wokhenketho kwiSiqithi saseHawaii. Ichonga iindawo ezinesidingo kunye nezisombululo zokuphucula umgangatho wobomi babahlali kunye nokuphucula amava endwendwe.
I-HTA ipapasha iSicwangciso soLawulo loKhenketho esiSekwe eluntwini seMaui Nui, nge-4 Matshi 2021
IGunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) lipapashe iphepha le- 2021-2023 Isicwangciso soLawulo lweNdawo yokuLawulwa kweMaui Nui (DMAP). Inxalenye yombono weqhinga le-HTA kunye neenzame eziqhubekayo zokulawula ukhenketho ngendlela enoxanduva kunye nokuhlaziya. Yaphuhliswa ngabahlali baseMaui, Molokai naseLanai, kunye nentsebenziswano ne-County of Maui kunye ne-Maui Visitors kunye ne-Convention Bureau (MVCB). I-DMAP isebenza njengesikhokelo sokwakha ngokutsha, ukucacisa kwakhona nokuseta kwakhona umkhombandlela wokhenketho kwezi ziqithi zintathu zenza iMaui Nui. Ichonga iindawo ezinesidingo kunye nezisombululo zokuphucula umgangatho wobomi babahlali kunye nokuphucula amava endwendwe.
Lonke udumo luya kubantu baseLanai, Molokai naseMaui abazibophelele kwinkqubo ye-DMAP kwaye bazimisele ukujongana nemiba enzima, bamkela iimbono ezahlukeneyo, baphonononge izimvo ezintsha kwaye babone izinto eziphambili ngokubaluleka. Inkqubo ye-DMAP ibonelela ngesakhelo esisebenzisanayo apho abathathi-nxaxheba bakhuthazwa 'kwi-malama' -ukukhathalela, ukukhulisa nokukhusela iindawo kunye nezithethe abazithandayo, utshilo uJohn De Fries, umongameli we-HTA kunye ne-CEO
I-HTA ipapasha iSicwangciso soLawulo loKhenketho esiSekwe eLuntwini eKauai, ngoFebruwari 5, 2021
IGunya lezoKhenketho eHawaii (HTA) lipapashe iphepha le- 2021-2023 ISicwangciso soMsebenzi woLawulo lweNdawo yokuFikela (DMAP). Inxalenye yombono weqhinga le-HTA kunye neenzame eziqhubayo zokulawula ukhenketho ngendlela enoxanduva nehlaziyayo. Iphuhliswe ngabahlali baseKauai, kunye nentsebenziswano ne-County of Kauai kunye ne-Kauai Visitor Bureau, i-DMAP isebenza njengesikhokelo sokwakha ngokutsha, ukucacisa kwakhona nokuseta kwakhona ulwalathiso lokhenketho kwi-Garden Island. Ichonga iindawo ezinesidingo kunye nezisombululo zokuphucula umgangatho wobomi babahlali kunye nokuphucula amava endwendwe.
Isicwangciso esisekwe eluntwini sijolise kwizenzo eziphambili uluntu, ushishino lweendwendwe namanye amacandelo abona ziyimfuneko kwisithuba seminyaka emithathu. Izenzo ziququzelelwe ziintsika ezine zonxibelelwano zeSicwangciso-qhinga se-HTA -Izixhobo zeNdalo, iNkcubeko yaseHawaii, uLuntu kunye neNtengiso yeBrand: